China Powder Brush China Manufacturers & Suppliers & Factory
Powder Brush - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Powder Brush)
Ukushayela Powder nge Handen Handle and Synthetic Hair
Le shayela eyaziwa ngama-filaments ayo amahle, ukunethezeka okunethezeka, nokusebenza okungenasici kwe-powder, izinwele zokwenziwa ngenye yezinkinobho ezithambile kakhulu ezisetshenziselwa ukukhishwa kwama-brush. I-Technology yethu isebenzisa ama-synthetic bristles ayenziwe ukwenza. inhlanganisela ye-wavy bristles...
Umbhoshongo wesipuni ngesibambo sokhuni
Ungasebenzisa ngokungenasisekelo izizinda eziphambili ze-powder. 1, ukuklama kobuchwepheshe nokuphatha kahle imizwa, yenza ubuso bakho bubonakale buhle, futhi kukunikeze imizwa evamile nsuku zonke. 2, lo shayela usebenza futhi uhlanganisa isisekelo ngezici zakho, ukuqinisekisa ukuthi ubuciko bakho bubukeka kahle futhi...
I-Mini Makeup Brush Isethi Ephathekayo
Ibhulashi lethu elincane yisisombululo sakho sokubukeka okungenasici on-the-go. Ukuthinta kufinyelelekile futhi kutholile Izinwele ezinhle nezicebile Kufaka: Ibhulashi elibomvu Ngokuhlanzeka kahle ukudala isikhumba esihle, amabala amancane amancane angasetshenziswa nge-powdery creamy texture blush Akukhona nje kuphela...
Inhloko e-Ergonomic elula kakhulu ethambile, Ngentombazane ethanda lokhu! Leli bhukhoni elenziwe kahle ukufaka kwiqoqo lakho! Ukuklama, isibambo esiphezulu sezinto ezenziwe nge-aluminium eqinile kungathuthukisa umphumela we-anti-skid nokuhlanganiswa okwenziwe ngokhuni, kuqinisekiswe ukuthi kusetshenziselwa ukwenza...
Lezi zitshalo zenziwe yi-factory yethu esebenza ngokubambisana neBrush Brush phezulu. Sithembisa ukuthi sizonikeza zonke amabhulashi amahle kakhulu ngekhwalithi engcono kakhulu. Iphelele ngokuhamba noma kumatasa wakho, indlela yokuphila okusheshayo. Kungasetshenziselwa ukuqeqeshwa kochwepheshe futhi futhi kwakha nsuku...
I-pink kakubi shayela i-powder kanye ne-brush enobuthi
I-Easy to carry and use.Yihle futhi iyisimanga; Ikhwalithi ephezulu.Kukhanya okulula futhi okutholile, ukudala kalula ukuphela kwe-makeup ecacile nekhono. I-SOFT ne-SILKY ekuthinteni, ama-brushes aqinile futhi ahlotshiswe kahle.Soft kodwa eqinile ukusebenzisa izimonyo, ama-crystals abuye aphume ngesikhathi senqubo...
Baboo ukuphatha ubuso powder shayela makeup brush kit
Baboo ukuphatha ubuso powder shayela makeup brush kit Le shayela elilodwa le-powder iyinhlanganisela yokwakheka okwesibhakabhaka esenziwe ngezandla, izinsipho zemvelo ezenziwe ngamapulangwe kanye nezilimo eziyizigaxa ze-aluminium shiny. Umklamo wobuchwepheshe, i -shayela edingekayo ekusebenzeni ubuciko nsuku zonke....
Powder Brush Brush Powder Brush I-Pink Powder Brush I-Brush Powder Brush I-Powder Brush single Powder Foundation Brush I-Goat Hair Powder Brush I-Singl Face Powder Brush